Ahoana ny fomba hanatsarana ny lanonam-panahin'ny vohikalan'ny adolantsika?
Amin'izao androntsika izao, SEO dia manana anjara toerana manan-danja amin'ny fivelaran'ny raharaham-barotra raha manana barazy na tobim-panafody eo an-toerana ianao. Amin'ireo tranga roa ireo, ny tanjona voalohan'ny mpandraharaha iray dia ny hisarika mpitsidika bebe kokoa ary hampitombo ny fidiram-bolany. Amin'izao fotoana izao mba hampiroboroboana ny raharaham-barotra ataonao dia mila mametraka azy ety anaty aterineto ianao ary manatsara araka ny fitsipiky ny fikarohana rehetra. Ny avo kokoa no raisinao amin'ny SERP, ny fivarotana anao kokoa.
Fomba fanatsarana ny fitadiavam-bola lehibe toy izany dia mitovy amin'ny fomba fanandramana tsotra miaraka amin'ny hany fahasamihafana amin'ny paikady fananganana rohy - reinforeced concrete silos. Ny tombony lehibe indrindra amin'ny SEO lehibe dia ny fahafahanao mametraka ny tranokalanao ao anatin'ity sehatra ity mora kokoa noho ny fihenanam-bahaolana ambany. Ataovy azo antoka fa manana fomba hanatanterahana ny fifamoivoizana ianao, satria tsy tonga mora.
Andeha isika hiresaka momba ny fitaterana ny fifamoivoizana amin'ny tranokala ho an'ny olon-dehibe ary alaivo amin'ny Google TOP.
Fitaovan'ny SEO ny SEO
Misy sehatra SEO efatra manan-danja izay manompo tsara indrindra ho an'ny fampielezan-kevitra, ary koa ho an'ny tranonkala fanatsarana ny tranonkala: tranonkala, fahefana, rohy mankany anaty.
Ny maha-zava-dehibe ny pejin-tranonkala dia ny maha-zava-dehibe ny Google. Mampiseho izany ho an'ny mpampiasa sy ny mpikaroka amin'ny tranonkala ho toy ny votoatin'ny tranonkala manokana ho an'ny fangatahan'ireo mpampiasa. Mba hahatonga ny toerana misy anao dia mila manatsara ny metadata sy ny votoatiny ianao. Voalohany indrindra, mila mampiditra fehezanteny manan-danja ianao ao amin'ny votoatin-tranonkalanao, lohateny, famaritana sy ny antitra antitra mba hahazoana antoka fa ho hitan'ny mpanjifa mety aminao ny tranokalanao mora mora. Ankoatr'izay, mila mamorona votoaty tsara be araka izay azo atao ianao. Amin'ny tranonkala olon-dehibe, azonao atao ny manoratra tantara erotika ary mamoaka azy isan-kerinandro.
Ny manam-pahefana avy amin'ny faritra dia misy lanjany iray lehibe kokoa izay tsy azo atao ny milaza ny marina. Ilana fotoana kely ahafahana mahazo ny fahafahan'ny tranonkala. Mba hanatsarana ny fahefam-pikomiana dia mila mandinika manokana ny fanatsarana ny pejy ianao ary mamorona fanentanana fananganana rohy. Ankoatr'izay, ny fahefan'ny sehatra dia misy fiantraikany eo amin'ny sehatra sosialy toy ny fitsinjaram-pahefana, ny fiovam-po, ny fotoana isaky ny mpampiasa iray mandany amin'ny tranokala iray.
Ankoatr'izay, mila mandrefy ny fahefan'ny rohy misy anao ianao, satria manan-danja iray izay mitarika ny tranokalanao SEO. Ilainao ny mametraka ny tranokalanao afa-tsy amin'ny sehatra manan-kery sy maharitra izay itokisan'ireo mpampiasa. Hanampy anao hanosika ny vohikalan'ny olon-dehibe eo anoloan'ireo mpampiasa miliara maotina izany. Manoro hevitra anao aho mba hieritreritra ny habetsaky ny rohy misy anao ary koa ny momba ny kalitaony. Ankoatr'izay, mila mahazo antoka ianao fa mametraka ny backlinks anao amin'ny sehatra manan-danja eo amin'ny sehatra varotra anao. Ohatra, tsy hijery hafahafa izany raha mametraka fifandraisana amin'ny olon-dehibe ao amin'ny tranonkalan'ny adult ianao.
Raha tsy manaiky ny dokam-barotra PPC ho an'ny olon-dehibe olon-dehibe ny Google, dia ny hany fomba hividianana fikarohana. Manantena aho fa ireo fomba fanao alefako nosoratako ato amin'ity lahatsoratra ity dia hanampy anao hanangana fampiroboroboana fampiroboroboana ary hanatsara ny tranokalanao SEO SEO.